နာဂစ်ဆိုက်ကလုံး ၀င်ရောက်မွှေနှောက်သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ မြန်မာပြည်မှာ သေဆုံးသူ ၁ သိန်းကျော် နဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ၁ သန်းကျော် ကျန်ရစ်တာ လူတိုင်းသိပြီးကြပါပြီ။ သေဆုံးသူတွေ သေဆုံးပြီး ကျန်ရစ်သူတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြချိန်မှာ နိုင်ငံရေး ကစားကွက် ရွှေ့ကြသူတွေကလည်း သူတို့ ရွှေ့မြဲတိုင်း ရွှေ့နေကြဆဲပဲ။ တကမ္ဘာလုံးက အုတ်အော်သောင်းနင်းနဲ့ အကူအညီတွေပေးကြ၊ အကူအညီ လက်ခံမယ်၊ လက်မခံဘူး။ ပစ္စည်းတော့ ယူမယ်။ လူတော့ လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကလည်း ရှုပ်နေဆဲ။ သေချာတာတစ်ချက်က သေဆုံးသွားကြတဲ့သူတွေ အတွက်ရော၊ မသေဘဲ ကျန်ခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်ရော ကမ္ဘာနဲ့ အ၀ှမ်းမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာတွေက သူတို့နဲ့ ထပ်တူ ထပ်မျှ ပူပန်နေကြ နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
အခုလည်း စင်္ကာပူမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ ကနေ မြန်မာပြည် ထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ကြတဲ့ အ၀တ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်တွေ ပင်နီဆူလား ပလာဇာမှာ လာရောက် လှုဒါန်းကြတဲ့ အရေအတွက် များပြားလွန်းတာကြောင့် လုံခြုံရေးနဲ့ မီးဘေးကို စိုးရိမ်ပူပန်လွန်းတဲ့ စင်္ကာပူ အစိုးရရဲ့ မျကိစိကျခြင်းခံရပြီး နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှာ အရေးတယူ ဖော်ပြရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သတင်းစာမျက်နှာကို အောက်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လမ်းပြကြယ်အနေနဲ့လည်း လာရောက်လှုဒါန်းမှုများ များပြားလွန်းတာကြောင့် ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးပေးနိုင်မှုမှာ လူအင်အား လိုအပ်တာကြောင့် လူအားဖြင့်လာရောက် ကူညီမည့်သူများ ကိုလည်း ကြိုဆိုပါကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။
Look into my web-site pluft.google-scraps.us
Also visit my web site :: http://Rideanything.com
Here is my site vatgiong.com
Visit my web-site: http://axj.com/
Needed to compose you one tiny observation just to thank you very much again for those beautiful solutions
you have provided on this site. This is quite shockingly generous with people like you to give openly
allalot of people could
possibly have made available for an ebook to end up
making some dough for
their own end, precisely considering that you might have done it if you ever desired.
additionally acted to becomeagood way to realize that other people online have the same passion really like my own to learnagreat deal more when considering this issue.
enjoyable opportunities ahead for individuals that browse through your blog post.
Feel free to visit my webpage: http://www.penpalspoint.com/?L=blogs.blog&article=341448
Jobs Sites In Singapore
နိုင်ငံတကာ ဇီဝမျိုးနွယ်စိတ်များ နေ့ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ...